Dị ka a Mac onye ọrụ a na mmadụ nwere ike na-eche ihu ọtụtụ njehie iji jide n'aka na ngwa aha dị ka ahịhịa na onye na-emi odude na desktọọpụ mgbe bupụrụ na nke kacha mma n'ụzọ. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye na nke a kwesịrị n'ahụmahụ na usoro e oyi kpọnwụrụ ma ọ bụ ụfọdụ na-atụghị anya njehie-adị mgbe ala ahịhịa nhọrọ e ji mee. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ na nke a kwesịrị ijide n'aka na ike efu nhọrọ a na-eji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe results na nke a na-enwetara na ọ pụrụ-mere na enyemaka nke ọzọ nhọrọ nke e aha dị ka ike efu ahịhịa na a nkuzi e mepụtara iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe results na-abụghị nanị nwetara ma onye ọrụ ọkọkpọhi chọrọ mere n'ime oge ọ bụla ma ọlị. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ na nke a kwa ga-eme oké elekọta ka ahịhịa na e bupụrụ forcedly-apụghị natara na ngwa nke omenala ụzọ na naanị nke igbe ụzọ nwere ike inyere onye ọrụ iji jide n'aka na ndị kasị mma e mere na nke a.
Gịnị mere ịmanye efu ahịhịa mgbe ụfọdụ?
Ọ na-e kọwara na zuru na onye ọrụ na onye na metụtara arụzi ụgbọala na-etinyere na nke a bụ ndị na-ekwe ka onye ọrụ iji na-enweta kasị mma na ndị ọkaibe atụmatụ n'ime oge ọ bụla ma ọlị. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na ruru ụfọdụ oru glitch omenala usoro nke efu ahịhịa anaghị arụ ọrụ na nke kacha mma n'ụzọ na maka otu ihe ahụ onye ọrụ a chọrọ iji jide n'aka na ndị na-abụghị omenala usoro na-etinyere iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma n'ime oge ọ bụla ma ọlị. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na usoro ifriizi na ụfọdụ na-atụghị anya njehie na ikwu na omenala usoro nke nsị ahịhịa bụ ihe na-emekwa ka onye ọrụ ịmanye efu ahịhịa enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Force efu ahịhịa na-agụnyekwa ụfọdụ elu eji nzọụkwụ na onye ọrụ kwesịrị ịgbaso na nke a na-eme ka n'aka na needful a mere enweghị ihe ọ bụla nke na-arụpụta ihe kasị mma na-enwetara na nke a. Nke ikpeazụ akụkụ nke nkuzi ga-emekwa ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma mma ngosipụta enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu.
Olee otú ịrụ ọrụ ahụ?
Ka e kwuru tupu nakwa na ndị kasị mma na ala nke usoro naanị ike soro nke na e nwere ezi Inyere aka na nke a nkuzi e mepụtara iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi ka isi usoro nke ike efu ahịhịa on Mac enweghị ihe ọ bụla na-egbu oge, nke na nsogbu. Ọ na-na--ahụ kwuru na nzọụkwụ na e kwuru ebe a na-Bilie screenshots na nke a nke na-eme n'aka na onye ọrụ na-kasị mma na ndị ọkaibe usoro a na-adịghị mgbagwoju anya mgbe niile. Ọbụna a novice ọrụ na onye ga-enwe ike iji ma na-etinye usoro site na dị nnọọ na-achọ na screenshots na e agbakwunyere n'ihi na onye ọrụ na-eme ka ihe anya mfe na hassle free:
1. The ọnụ ngwa bụ na-ulo oru na enyemaka nke utilities nchekwa n'okpuru nke a ngwa nwere ike chọọ mfe:
2. Ozugbo ngwa kemgbe emeghe onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na iwu enyere na e gosiri n'okpuru e dere. N'ihi na ala nke onye ọrụ na-ede kwesịrị sudo RM -rf ~ / .Trash / * ka e needful mere.
3. Ozugbo ọ e mere na ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ na nke a pụrụ ịhụ na ahịhịa nchekwa na e odude jidesie desktọọpụ e bupụrụ enweghị ihe ọ bụla nke na-agwụcha usoro a dị ka nke ọma:
Ọ bụrụ na ike efu e mere accidently mgbe ahụ ihe na-eme
Na oge a bụ njehie nke onye ọrụ ihu na nke a na-eme ka n'aka na nke kacha mma e mere ka usoro na ekwentị ọ na-gwara iji jide n'aka na Wondershare Data Recovery for Mac a na-eji jide n'aka na ndị kasị mma na ala nke nkà ngwá ọrụ na-eji na-chọrọ ihe mere n'ime kacha nta oge. Ọ bụ n'ezie a ọkaibe ngwá ọrụ nke na-eme n'aka na onye ọrụ na-akawanye-arụ ọrụ mere enweghị ihe ọ bụla hassle na n'ime kacha nta na o kwere omume oge dị ka ngwá ọrụ ndị na e agbakwunyere n'ime usoro ihe omume na-eme ka n'aka na usoro nke data mgbake-aghọ mfe dị ka ọ nwere ike nwekwara-ahuta ka ndị kasị mma nontraditional usoro:
1. Site URL http://www.wondershare.com/data-recovery-mac/guide.html onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na usoro ihe omume ebudatara:
2. The furu efu faịlụ mgbake nhọrọ bụ mgbe ahụ ka ga-ahọrọ iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe atụmatụ na-enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. A nzọụkwụ onye ọrụ dịkwa mkpa iji jide n'aka na mbanye ebe data ọnwụ mere na-ahọrọ na usoro a na-scanned:
3. Ozugbo omume na-abịa na natara data onye a ga-nọ nwere ike natara na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị ọzọ na-trashed:
Top Iri Best DVD Players maka Mac
Apple Final Cut Express maka Mac
> Resource> Mac> Olee ịmanye efu na ahịhịa na gị mac